Farmaajo oo tacsi tiiraanyo leh ka diray geerida Xasan Abshir Faarax
Marxuumka ayaa ku dhintay Turkiga, halkaas oo muddooyinkii dambe uu ku xanuunsanayey.
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweyne Farmaajo ayaa tacsi tiiraanyo leh u diray qoyskii, qaraabadii iyo ummadda Soomaaliyeed ee uu ka baxay Alle ha u naxariistee Marxuum Xasan Abshir Faarax oo ku geeriyooday Turkiga.
Sidoo kale, Farmaajo ayaa tilmaamay doorkii Marxuum Xasan Abshir Faarax uu ka soo qaatay dadaalladii dowlad dhisidda iyo dib u heshiisiinta dalka.
Marxuumka ayuu Alle u weydiiyey in uu hoygiisa ka yeelo Jannatul Fardowsa, samir iyo iimaanna uu ka siiyo qoyskiisa iyo guud ahaan Dowladda Soomaaliyeed ee uu ka geeriyooday.
Sikastaba h ahaataee, Xasan Abshir Faarax ayaa muddooyinkii u dambeeyay wuxuu ku xanuunsanayey waddanka Turkiga, halkaas oo xaaladiisa caafimaad lagula tacaalayey. Geeridiisa waxaa sidoo kale ka tacsiyeeyay siyaasiyiin badan.
Aqalka Cad oo ka hadlay qaraxa Muqdisho, Trump oo ka aamusey
Caalamka 17.10.2017. 12:34
Hadal kasoo baxay guriga looga arimiyo Dowlada Mareykanka (White House)....
​Saldhiga Turkiga Muqdisho oo Maanta la furayo
Soomaliya 30.09.2017. 10:57
Farmaajo oo dib ugu laabtay Muqdisho [Sawirro]
War Saxaafaded 11.07.2018. 12:52